ao anatin’ny 15 andro dia nanapa-kevitra ny avy eo anivon’ny Top Chretien Madagascar fa hahemotra amin’ny fotoana manaraka ny hetsika “Salon des entrepreneurs Chretiens” tokony notontosaina tamin’ity herinandro ity. Amin’ny maha kristianina ny tena, hoy ny tomponandraikitra, Norotiana Andriamanohy, dia fotoana izao hanehoana ny firaisankinan’ny Kristianina. Efa nisy zavatra natao teo aloha saingy mila ahitana vokatra sy fitoizana. Misy finoana iray ankehitriny tena maneho ny firaisankinan-drizareo fa ny mampalahelo amintsika Kristianina kosa, hoy izy, dia matetika lasa mirona any amin’ny fifaninanana. Tsara apetraka anefa fa azo atao ny mifanampy hanosika tanjona iray, hoy hatrany izy.